Izindaba - Lwela ukwakha umgoqo wokuphepha wezempilo yomphakathi wasemadolobheni
Chofoza kumakhalekhukhwini ukuze wenze ngokuqondile isikhathi sokuhlolwa kwesikhathi se-nucleic acid, ukukhokha online, isampula esizeni, imiphumela yombuzo wesicelo se-inthanethi ngemuva kweqiniso… Maphakathi noNovemba, iShanghai “Health Cloud Nucleic Acid Testing Registration Version 2.0 ″ Yasungulwa ukuze isebenzele ezomnotho ngendlela ehlakaniphile, esebenza kahle futhi elandelekayo Ijubane lokusimama komphakathi liqinise umugqa wokuvimbela ubhadane lwasemadolobheni.
Ubhadane lomqhele olusha lushaya kanye "nezinhlanga" ezilwa negciwane. Uchungechunge lwemisebenzi emisha engakaze ibonwe luzosheshisa kancane kancane ngonyaka wezi-2020. Ukubhabhadiswa “kwesifo” sempi nakho sekwenze abantu bazi ngokujulile ukuthi uhlelo lwezempilo lukahulumeni luyingxenye ebalulekile yokuqinisekisa impilo yabantu bonke.
Unyaka obalulekile, imisebenzi ekhethekile! Iseshini Yeshumi Yekomidi Leshumi Nanye Lamaqembu Eqembu likaMasipala ebibanjelwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ligcizelele isidingo sokwenza umsebenzi oqinile ekuphothulweni koHlelo Lweminyaka Eyisihlanu Lweshumi Nantathu kanye nasekuqaleni koHlelo Lweminyaka Eyisihlanu Lwe-14. Lapho sibhekene nesimo samanje esiwubhadane, sizohlala sigcina izinga eliphakeme lokuqapha, ukuphendula ngokwesayensi, ukuphendula okubucayi, kanye nokuqaliswa kwenqubomgomo okuqondile, ukuqhubeka nokuqinisa ubhubhane olujwayelekile lokulawula nokulawula kanye namandla okuphendula okuphuthumayo, futhi senze umsebenzi oqinile “Okokuvikela kwangaphandle nokuvukela ngaphakathi”.
Kudwetshwa uhlelo olusha, bese kuqala uhambo olusha. Uhlelo lwezokwelapha nezempilo lwaseShanghai lubhekene nomsebenzi walo, futhi lwenza yonke imizamo yokwakha umgoqo wokuphepha kwezempilo yomphakathi ngobuhlakani bolwazi, indlela yokuphendula, kanye nesibindi sokufuna ushintsho, ukwakha umugqa oqinile wokuvikela abantu izimpilo, nokubhala inkathi entsha “idolobha, yenza impilo ibe ngcono Isahluko esisha“ esihle ”.
Thuthukisa ukubheka phambili futhi wakhe uhlelo lwezempilo lomphakathi oluphelele
NgoNovemba 1, "iMithethonqubo kaMasipala waseShanghai Ephathelene Nokulawulwa Kwezimo Eziphuthumayo Komphakathi" yaqala ukusebenza. Kusukela ekuqapheni nasexwayisweni kusenesikhathi kuya ekuphenduleni okuphuthumayo, ulwazi olusebenzayo lwangaphambilini selufinyeziwe lwaba izahluko eziyi-10 kanye nama-athikili angama-85. Ukusungula uhlelo lokuphathwa kwezimo eziphuthumayo zomphakathi "lokuvimbela kuqala, ukuthula nempi kuhlangene", iShanghai, idolobha elikhulu, ihlala yakha ulayini oqinile futhi oqinile wokuvikela umphakathi. Lokhu futhi kuyimithethonqubo yokuqala yokuvikela nokulawula ubhubhane ezingeni lesifundazwe.
Ukuvinjelwa komqedazwe eDacheng kudinga impendulo esheshayo nenembile, kanye nokwesekwa kwesikhungo. Emuva ngesikhathi ngoJanuwari 20, 2020, iShanghai ibike icala lokuqala eliqinisekisiwe le-pneumonia entsha ye-coronary; ngoJanuwari 24, ngosuku olwandulela uNcibijane, iShanghai yethula indlela yokuphendula eyinhloko yezimo eziphuthumayo ezinkulu zempilo yomphakathi. Ukuqubuka “komqedazwe” wempi kuholele kuzinguquko ohlelweni olunzulu. Ngo-Ephreli 7, iShanghai yabamba ingqungquthela yokwakha ezempilo yomphakathi futhi yakhipha “Imibono Eminingana Yokuthuthukisa Uhlelo Lokuvimbela Nokulawula Lwezifo Ezinkulu kanye Nokuthuthukisa Uhlelo Lokulawulwa Kwezimo Eziphuthumayo Zomphakathi” (olubizwa nge- “Shanghai 20 Public Health Construction”). Umhlangano washo ngokusobala: Ngo-2025 iShanghai izoba ngelinye lamadolobha anamandla kakhulu ohlelweni lwezempilo lomphakathi lomhlaba wonke.
"Silwa nalomqedazwe, futhi siyabona futhi siphakamisa ukwakhiwa kabusha kanye nokwenziwa ngcono kohlelo lwezempilo lukawonkewonke emadolobheni, futhi sizama ukubhebhethekisa ukuphathwa kwezokuphepha komphakathi emadolobheni amakhulu." USolwazi Luo Li, onguNobhala Weqembu weSikole Sezempilo Yomphakathi saseFudan University, utshele abezindaba. “Umqondo” osemuva kokwakhiwa kohlelo oluthile lokuphathwa kwezokuphepha kwezempilo yomphakathi emadolobheni amakhulu kulele kulokhu: Okokuqala, ukugcizelelwa ekuvikeleni ukufeza isexwayiso sokuqala ngokulawulwa kwezifo okubucayi nokuphelele kanye nohlelo lwezempilo lomphakathi. Okwesibili, ukufuna "izehlakalo zero" akuhambisani neqiniso. Ngakho-ke, lapho kuvela amacala angavamile, ukuthi ucisha kanjani "ilangabi" ngesivinini esisheshayo futhi ngezindleko eziphansi futhi ugcine ukusebenza okujwayelekile kwempilo yezenhlalo nezomnotho yilokho uhlelo okufanele luphishekele.
"Ngokombono wamanje, ukuvimbela kanye nokulawula kwethu okuqondile kanye nokulahlwa ngokushesha kwamacala asanda kuvela sekuvele kubonise ukusebenza ngempumelelo kokuthuthukiswa nokwakhiwa kwezempilo yomphakathi emadolobheni." ULuo Li uthe empini yokulwa nomqedazwe omusha we-pneumonia, iShanghai inezinkampani eziyi-117 kulo lonke leli dolobha. Imitholampilo yemfiva kanye nemitholampilo engama-200 yomkhuhlane womphakathi ibambe iqhaza elibalulekile. Ngibheke phambili esikhathini esizayo, ukwakha “udonga lwethusi nensimbi” lokuvikela nokulawula ubhubhane lwedolobha, kusukela ekuthuthukisweni kohlelo lwezempilo lukahulumeni kuya ekwakhiweni kwezinhlelo zokuqondiswa kwezigwegwe namathalente afana nokutheleleka, izifo zokuphefumula, kanye nemithi yokunakekelwa okubucayi kuzoba umsebenzi wesikhathi eside, odinga ukubekezela. Ukwenza, kuyadingeka ukuqinisa ukwakheka okubheke phambili nokwakhiwa kwepulani, futhi ubambe iqhaza lomsebenzi.
Ukuhlangabezana ngokunembile nezidingo zabantu nokusheshisa ukuguqulwa kwe- “Smart Digital Hospital”
Iseshini yamalungu amaningi iveze ukuthi kufanele sithuthukise ngokugcwele uguquko lwedijithali lwamadolobha. Ukuguqulwa kwedijithali kwamadolobha kuyisihloko esisha sha, ubunjiniyela bohlelo, obandakanya zonke izici zokukhiqizwa kwamadolobha, impilo, kanye nemvelo, kufaka phakathi idigitalization yezomnotho, i-life digitalization, kanye nokubusa kwedijithali.
Ukusheshisa uguquko lwedijithali nokwakha izibhedlela “ezihlakaniphile” yilokho abantu abakufunayo manje. Ngokwezibalo zakamuva, izibhedlela ze-Intanethi ezingama-43 eShanghai seziqalise izinsizakalo zokuxilonga nokwelashwa nge-Intanethi, futhi “i-Internet + Nursing Services” isazama ukuhlolwa ezifundeni ezine ezihlanganisa iChangning, iJing'an, iPutuo, nePudong.
E-Xuhui District Central Hospital, njengoba kwaba isibhedlela sokuqala somphakathi eShanghai ukuthola ilayisense yesibhedlela se-Intanethi ngoFebhuwari kulo nyaka, ukubonisana ngezokwelapha online, ukubonisana ngokulandela "ifu", ukukhokhelwa komshwalense wezokwelapha online, kanye nokulethwa kwemithi ekhaya konke kufezekisiwe kulesi sibhedlela. Kusukela ngoNovemba 27, “Isibhedlela iXuhuiyun” sesithole odokotela abangaphezu kwama-35,000 futhi sakhipha nemiyalelo engama-6,557. "Ukubona udokotela ekhaya ngaphandle kokushiya ikhaya" sekuyinto ejwayelekile yansuku zonke kubantu abaningi.
“Ngenxa yokwesekwa kochungechunge lwemigomo, isibhedlela iXuhuiyun sesizuze intuthuko esobala. Njengamanje, inani elijwayelekile lokubonisana okuku-inthanethi ngosuku ngama-400-500, futhi ikhwalithi yokubonisana nayo yenze ukweqa kwekhwalithi: ukubonisana okulula kwezempilo kuyingcosana, futhi isidingo sezinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo yiso esijwayelekile. Ngamafuphi, esikwenzayo 'izidingo zezempilo nje' zabantu abavamile nokuxazulula uchungechunge lwezinkinga ezisebenzayo. ” kusho uZhu Fu, umqondisi omkhulu weXuhui District Central Hospital.
Ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwedatha yezokwelapha sekuvele kufakiwe ezimpilweni zezakhamizi zaseShanghai. Ngemuva kokuqubuka, "ikhodi nesicelo" yaba "ukucushwa okujwayelekile" izakhamizi zaseShanghai ukuthi zihambe, okungagcini nje ngokwenza kube lula ezakhamuzini, kodwa futhi kunciphise ingcindezi ekuvikeleni nasekulawuleni ubhadane lwendawo. Njengesiqalo esibalulekile sokuqala “inethiwekhi eyodwa ukuvula” kanye “nokuphathwa okuhlangene kwenethiwekhi eyodwa”, lolu hlelo lokusebenza olusungulwe ngokushesha alugcinanga “ezinyathelweni ezifanele”, kepha luqhubekile nokukhulisa izimo zalo zohlelo lokusebenza, lwaguqula lwaba yikhodi yesevisi ephathekayo yesakhamuzi umkhakha wokuphathwa komphakathi nezinsizakalo.
Emtholampilo wabangalaliswanga esibhedlela i-East Hospital yesibhedlela iRenji, uNkk Li ulinde ewindini lokubhalisa wathola ukuthi uyaphuthuma ekuseni futhi akayilethi ikhadi lakhe lomshwalense wezokwelapha. Wamangala ukuthi isibhedlela sesethule umsebenzi omusha ukuxhasa “ukulahla okwenziwayo” kwekhadi lomshuwalense wezokwelapha, okungukuthi, ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukufaka isicelo sesitifiketi somshuwalense wezokwelapha ku-inthanethi. Ngemuva kokuthi isicelo siphumelele, thwebula iwindi ngekhodi ye-QR bese ulalela kuphela u- “di” Ngomsindo owodwa, ukubhaliswa kokuqokwa komshuwalense wezokwelapha kuqediwe.
Ngenxa ye- "One Net Service" ethula i- “One Thing for Medical Payment”, i- “Apply Code” ne- “Medical Insurance Electronic Voucher” zixhumekile, futhi manje izakhamizi zaseShanghai sezingasebenzisa i- “Apply Code” ukufaka isicelo sokubhaliswa ezibhedlela zikahulumeni. kulo lonke idolobha. Ukwelashwa, ukukhokhelwa nezinye izinqubo.
Ukuphendula izidingo ezikhethekile "ezingathintani" zezifo ezithathelwanayo, kuzokhuthaza ukuguqulwa kwezibhedlela ezibonakalayo zibe "izibhedlela ezihlakaniphile zedijithali". UZhu Fu utshele abezindaba ukuthi ipulatifomu yesibhedlela iXuhuiyun isaqhubeka. Ngokuzayo, izinsizakalo zezokwelapha ze-Intanethi zizoqhubeka nokuhlangabezana ngokunembile nezidingo zezempilo zabantu, futhi zihlole izinguquko ezijulile ndawonye neziphathimandla ezilawulayo kanye nezinkundla zobuchwepheshe.
Ukubhekana ne-Yangtze River Delta futhi ubhekene nezwe lonke, ngokuqhubekayo ukwenza ngcono izinga lezinsizakalo zezempilo
Ekupheleni konyaka, kukhona ucezu lwezindaba ezinhle ezijabulisa abantu: IShanghai isiqedile imisebenzi yonyaka ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kokuphela kuka-Okthoba kumaphrojekthi asebenzayo kahulumeni kamasipala angama-26 ezindaweni eziyishumi kulo nyaka.
Ukuthatha igxathu langaphambilini ukuhlela ukwakheka, qhubeka ukugxila ngamandla ekuphathweni kwenqubo, ukuze abantu babe nomuzwa wangempela wenzuzo. Amaphrojekthi asebenzayo kahulumeni kamasipala angama-26 afaka phakathi: ukwengeza imibhede engama-7,000 yabantu abadala, nokwakha imiphakathi emisha engama-50 ngokuphelele njengezikhungo zosizo ezindala; Izindawo ezingama-200 zokuphakela abantu asebekhulile, zivuselelwe imibhede engu-2 000 yokunakekelwa kwabahlengikazi abakhubazekile engqondweni; iziteshi ezingama-11 zezimo eziphuthumayo (120) ezisanda kwakhiwa; ungeze iziteshi zezempilo eziyi-100, njll. Ngemuva kwalezi zinombolo ukulangazelela nokulindela kwabantu izinga eliphezulu lempilo.
Isekwe eQingpu, isebenza i-Yangtze River Delta, futhi ibhekene nezwe lonke, ngo-Okthoba 24, isibhedlela se-Intanethi i-Yangtze River Delta (Shanghai) saqala ukusebenza. Ithembele ekusekelweni ngezebhizinisi kweZhongshan Hospital ehlangene neFudan University futhi kusekelwe ekwakhiweni kweZhujiajiao People's Hospital esifundeni saseQingpu ukuhlanganisa izinsiza kusebenza ezisezingeni eliphakeme esifundeni iYangtze River Delta. , Ukwenza ngcono izinga lezinsizakalo zezempilo zeYangtze River Delta Eco-Green Integrated Development Demonstration Zone, futhi siqhubeke nokuqhuba ukuthuthukiswa kwemithi ehlakaniphile, ukwelashwa kwezokwelapha, umshuwalense wezentengiselwano, kanye nezokuvakasha kwezokwelapha eYangtze Delta Demonstration Zone.
ISibhedlela i-Internet i-Yangtze River Delta (iShanghai) sesiqede isigaba sokuqala sokwakha, futhi kunezinhlelo zesigaba sesibili sokwakha. UWu Jinglei, umqondisi we-Shanghai Municipal Health Commission, lapho ekhuluma ngombono wesikhathi eside weSibhedlela i-Yangtze River Delta Internet, usho ngokukhethekile ukuthi unethemba lokuthi lesi sibhedlela, esazalwa sinezinto ze-Intanethi, sizogxila kulwazi lwesiguli, sinamathisele ukubaluleka kokuxhuma, futhi usebenze kanzima kule nsimu yokuhlola yokwenziwa kobuchwepheshe bezokwelapha. "Qhubeka ulalele ulwazi lwabantu abavamile kwezokwelapha, futhi uthuthukise njalo imodeli yezinsizakalo, ukuze ube yindawo ekhombisa ngokukhalipha kwezokwelapha eYangtze River Delta, ezweni lonke nase-Asia, ehola intuthuko yesikhathi esizayo."
Cabanga ngesimo sonke, ukhonze isimo sonke, futhi uvule umdlalo omusha, ikusasa lingalindelwa. Kule nyanga, njengenye yamaphrojekthi abalulekile e- "Healthy Shanghai Action (2019-2030)", uhlelo lokuqalwa kohlelo lokwakhiwa komthelela wezempilo oluphelele seluphothuliwe, oluzohlola ngokuhlelekile umthelela wezinhlelo ezinkulu zokuthuthukisa ezomnotho nezenhlalo, izinqubomgomo , namaphrojekthi wobunjiniyela kwezempilo yomphakathi. amathonya. "Impilo ihlanganiswe kuwo wonke amasu", iShanghai iyaqhubeka nokusebenza futhi isebenze ngokubambisana ukuvikela impilo yabantu kangcono.